Wasiirrada Arrimaha dibadda ee dalalka Iiraan iyo Turkiga oo maanta Muqdisho yimid. – Radio Daljir
Nofeembar 14, 2012 10:29 b 0
Muqdisho, Nov 14 ? Waxaa maanta oo (Arbaco ah) magaalada Muqdisho yimid wafuud ballaaran oo ka kala socotay waddamada Iiraan iyo Turkiga, ayna kala hoggaaminayeen wasiirrada Arrimaha dibada ee labadaasi dal.
Waftiyadaan ayaa si diirran loogu soo dhaweeyey Muqdisho, iyadoo ay soo dhaweyntoodana ka qaybgaleen madaxda sarsare ee dalka, xubno iskugu jira golayaasha dawladda, duullamaasiyiin horay ugu sugnaa Muqdisho ?iyo dadweyne badan.
Soo dhaweyn iyo imaatin kaddib, ayey labada wasiir Arrimo-dibadeed ee dalalka Iiraan iyo Turkigu, waxay kulamo la yeesheen mas?uuliyiinta sarsare ee dawladda federaalka sida m/weynaha, R/wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, iyadoo la isla soo qaaday qodobo badan oo ay ugu miisaan cuslaayeen kala war-qaadasho ku saabsan meelmarka mashaariic waddamadaasi ay Muqdisho ka wadeen iyo wajihidda qorshayaal cusub oo horleh.
Wasiirrada Arrimaha dibadda? ee Iiraan iyo Turkiga Cali Axmed Saalixi iyo Axmed Daa?uud Oogle, ayaa si siman uga hambalyeeyey hannaanka dawladnimo ee Soomaaliya iyo halka haatan wax joogaan, iyagoo xusay muuqashada is-baddal lagu nooloon karo oo amniga iyo arrimaha hormarka iskugu jira.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Iiraan Cali Axmed Saalixi, ayaa sheegay qorshihiisa imaatin ee Muqdisho in ay ka mid tahay furidda safaaraddii Iiraan ee Soomaaliya.
Waddama Iiraan iyo Turkiga, ayaa ka mid ah dalalka sannadahaan dambe ka soo dhaxmuuqday arrimaha Soomaaliya, waxayna door weyn ku lahaayeen gargaarro lagu taakulaynayey danyarta Soomaalida iyo adeegyo kale oo xagga hormarinta la xiriiray oo Soomaaliya lagu caawiyey.